Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes kpughere $ 30 nde mmezigharị na ntụgharị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes kpughere $ 30 nde mmezigharị na ntụgharị
Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ritz-Carlton Orlando, Osimiri Grande na-ekpughe $ 30 Nde Ntughari na Nweghachi
Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ga-arụzigharị ọmarịcha ọdọ mmiri ya na cabanas na ebe ezumike klọb Ritz-Carton
Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes kpughere ụlọ a na-atụ anya ya nke ukwuu, ụlọ ndị ọbịa emegharịrị ọhụrụ, ọdọ mmiri okomoko na klọb klọb. Ntughari $ 30 nde na-edozi ụlọ, akwa, na ebe obibi a nụchara anụcha, ọdọ mmiri ọhụrụ okomoko na cabanas na ungelọ ezumike ezumike emelitere.
Ruru iji zuru ezu na February 2021, ụlọ ndị ọbịa 582 ahụ ga-egosipụta atụmatụ sitere na ọmarịcha ịma mma nke ala ahụ mara mma, mmiri jupụtara na anụ ọhịa na gburugburu ebe obibi. Roomlọ ọ bụla na-enye ndị ọbịa ebe nsọ iji zuru ike ma zuo ike site na iji akara ngosi teknụzụ agbakwunyere maka ndị njem ọgbara ọhụrụ gụnyere ogo ịntanetị dị elu na ntinye ọfụma ndị ọrụ. Ọhụrụ a na-eweta agba dị nro, akwa anụ ahụ, yana ihe owuwu pụrụ iche nke na-ejikọta ahịrị ndị mara mma na nkọwapụta nke oge a maka ikuku ụwa nke na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ, ma na-akasi obi.
A nabatara ndị ọbịa n'ime ụlọ ahụ site na nkwanye ugwu sitere n'ike mmụọ nsọ nke jupụtara na nkọwa mmiri, yana ihe osise mara mma nke na-ekwu maka ịdị nwayọ, nke nụchara anụcha, na nke a na-atụghị anya ya nke ndụ mpaghara. Ihe ndị a na-esite na mmụọ nsọ na-aga n'ihu n'ime ụlọ ndị ọbịa ahụ na mgbidi mgbidi a rụchara arụ, ọkụ na-ehi ụra na-atọ ụtọ nke ọma na-agbasa site na oriọna ọkụ na akwa iko nke ụwa na-ese n'elu ụlọ. Ikwughachi Ritz-Carlton Orlando, Osimiri Ukwu'Ihe mgbakwasị na 500 acres nke ịma mma, jiri nlezianya tụlee ihe osise a haziri n'ime ụlọ ahụ, na-akpali mmetụta nke mmegharị ma na-esite na foto eserese nke mmegharị okike na ịdị jụụ na mmiri, ájá, na mbara igwe mepere emepe karịa Florida.
N'ịga n'ihu na isiokwu a, nke a na-eji okwute eme ihe na-etu ọnụ ihe dị iche iche dị ka nkata azu maka ụbọchị njem. A na-akọwa arịa ụlọ dị mma nke ime ụlọ ahụ, gụnyere oche oche na oche osisi, akwa ndina, na ebe ezumike, maka ịdị mma na nkasi obi, na-ejedebe ọgaranya na ịba ụba na ụda olu na-akpọ ndị ọbịa oku ịla azụ, zuru ike, ma chere. Mgbapu mgbidi na-adị nro ma na-edozi ya, yana usoro omenala nke ejiri nlezianya tụlee iji kwado ihe ndị ọzọ dị n'ime ụlọ ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ịsa ahụ ndị ọbịa na-adị mma ma na-akọwapụta nke ọma na mmiri mpịcha abụọ, ala mabul na splashguards, ime ụlọ awara awara na ịsa ahụ, na ime ụlọ mmiri dị iche.
Mgbe emechara ụlọ ndị ọbịa, The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes ga-arụzigharị ọmarịcha ọdọ mmiri ya na cabanas na ụlọ ezumike Ritz-Carton Club, nke na-enye ndị ọbịa ohere izukọta, zuru ike ma rie nri n'oge ọhụụ. A ga-agwụcha ọdọ mmiri na ebe ezumike na Machị 2021.
Canada na-akwado ụlọ ọrụ iche iche nke nchekwa onwe onye nchekwa COVID-19 na Waterloo, Ontario
Mgbasa mgbochi ọgwụ mgbochi mba nke COVID-19 malitere na Seychelles